I-Weasel Igama - Inkcazo kunye nemizekelo
Igama le- weasel ligama elitshintshileyo elincinci okanye eliphikisa intsingiselo yelizwi, ibinzana, okanye igatya elihamba nalo, njengelithi "ukuchaneka kwangempela ." Yaziwa nangokuthi i- weaselism .
Okubanzi ngokubanzi, igama le-weasel lingabhekisela kuye nawaphi na amagama asetshenzisiweyo ngenjongo yokulahlekisa okanye ukungaqondi kakuhle.
Eli thuba laqulunqwa ngumlobi uStewart Chaplin ngowe-1900 kwaye lupapashwa nguTheodore Roosevelt ngentetho ngo-1916.
Jonga imizekelo engezantsi.
I-Dictionary ye Phony Phrases
Ulwimi kwi-e-: i-Academese, i-Legalese, kunye nezinye iintlobo ze-Gobbledygook
Umzekelo Wokuqala wexesha
"NgoJuni, ngo-1900, i- Century Magazine yashicilela ibali elinesihloko esithi 'I-Plateform ye-Political Stained Glass", nguStewart Chaplin, ... nakwiphepha 235 la mazwi ayenzeka:
Kutheni, amagama e-weasel ngamazwi atshaba ubomi bonke ngaphandle kwamagama alandelayo kubo, njengokuba i-weasel idonsa iqanda kwaye ishiya igobolondo. Ukuba uxuba iqanda emva koko likhanya njengentsiba, kwaye akuyi kuzaliswa xa ulambile, kodwa i-basketball yabo iya kwenza umboniso, kwaye yayiza kuwuqhayisa.
"Lo mvelaphi yegama elithi Colonel [Theodore] Roosevelt wenze udumo."
(UHerbert M. Lloyd, incwadi eya eNew York Times , ngoJuni 3, 1916)
"Nceda" njengeLizwi le-Weasel
"Cinga ngegama le- weasel lncedo ." Uncedo lithetha 'uncedo' okanye 'uncedise' kwaye akukho nto enye. into enokuthi ingatshoyo. Ngenxa yokuba igama luncedo lisetyenziselwa ukufaneleka, phantse nantoni na ingathethwa emva kwayo. Ngako-ke sichazwa kwiintengiso zeemveliso 'ezinokusinceda siselula,' 'kunceda ukukhusela imithwalo,' 'uncedo ukugcina izindlu zethu zingenasiphelo. Cinga ngethuba elithile kangangoko ngosuku uva okanye ufunde imigama efana nale: unceda ukumisa, kunceda ukukhusela, kunceda ukulwa, kunceda ukunqoba, kunokukunceda uzive, kukunceda ukhangele. "
(UWilliam H. Shaw, i- Ethics Ethics: Iincwadi zeeNkundla , i-7 eWadsworth, iCengage, 2011)
"Ndiyayithanda igama elithi" faux. " Okokuqala ndakufunda ukuqonda eli gama elibukela iziteshi zokuthenga ekhaya, ezandixhalabisa ngeenyanga ezininzi. Kwi-parlance yazo ephawulekayo, i-vinyl yaba yikhumba ye-faux kunye ne-glass cut we became faux diamonds. kwindlela ezwakala ngayo. Yaye xa uyifaka phambi kwesibizo, eso sibizo siphetha ngokuthatha into echaseneyo. "
(UJeanne Cavelos, ocatshulwe nguLuke Burke Frumkes kwiLizwi eliMnandi laBantu abaziwayo .
Okokuqala, uphando lwentsikelelo luvelisa impendulo engafanele kumbuzo weklinikhi. I-faux imfundo iyaqinisekisa ukuba oogqirha yonke indawo bayayiva malunga nayo, ngoko banokubhala izigidi zemigqaliselo esekelwe kwingcaciso engafani.
(Marcia Angell, Inyaniso Ngeenkampani Zamachiza: Indlela Abasikhohlisayo Nento Yokuyenza Ngayo . I-Random House, 2005)
Ngoko, Nazi ezinye iiWeasel Words
"Njalo. Le ngqungquthela malunga namanqaku oluntu kunye namalungu ewonke jikelele sele aqale ukulungisa into ebeyithetha ngayo ngelizwi elithi 'njalo' xa luququzelelwe umsebenzi wokuzibonakalisa. 'Ngoko ke' entsha ' khangela. ....
"Kwamaxesha onke amazwi ahlala ejikeleza i- lexicon isaltifaling artifice kwaye kukho abanye ngeenxa zonke." Ukubeka ipakethe kunye 'Ndingathanda ukuthetha' okanye 'Ukunyaniseka' zihlala zikhula. igama lomzuzu, ukusasazeka ekusebenziseni ngokubanzi.
"NgoMvulo odlulileyo ngokuhlwa, ilungu le-intanethi ludliwano-ndlebe kwi-Radio 5 Live ngaphandle kwe-Buckingham Palace. Bambuzwa ukuba kutheni yena nomngane wakhe beza khona, wathi: 'Ngoko. Saphuma sidla kunye kunye bobabini bafumana iitekisi ezivela kubayeni bethu ngexesha elifanayo besithi umntwana wasezulwini wazalwa. 'Ngoko' kuye kwaba yindlela yokuba umntu aqale ukuhanjiswa kweakhawunti yakhe. "
(U-Oliver James, "Ngoko, Nantsi Isivakalisi Esiqhotyoshelwe Ngenyameko Esibonisa Ngokukhanya Kwam." I-Guardian [UK], Julayi 26, 2013)
"Njengombhali wexesha elidala, ndandibona ngokukhawuleza, kwizivakalisi ezibini ezilandelelanayo, i- weasel-word 'echazwe,' iHood- time -ored hedge malunga nokuba kungenzeka ukuba izibakala kwisigwebo esifanelekileyo zingasayi kuhlolisisa."
(UJohn Gregory Dunne, "Ixesha Lakho Lilixesha Lami." I-New York Review of Books , uEpreli 23, 1992)
" Amagama e-Weasel ayenzeka kwiingxoxo . Qwalasela oku kulandelayo:
Ekubeni ukuhlawula umqeshwa umvuzo omncinci wamanje ufana nokuba nekhoboka, kwaye ekubeni ubukhoboka abukho mthethweni phantsi komGaqo-siseko, umvuzo omncinci wamanje kufuneka utyeshelwe.
Konke oku kubonakala kulungelelwano size sibheke phambili kwigama elincinane le-weasel 'ngokuqinisekileyo.' Ukunikezela ingxabano kungekhona ukunika ingxabano enhle . "
(Malcolm Murray noNebojsa Kujundzic, UkuCamngca okuBalulekayo: Incwadi yokuCinga ukuCinga . McCill-Queen's University Press, 2005)
" Kwiingqungquthela ezixhasayo kwiNgqungquthela, nantoni na engeyiyo okanye i-populist yomsindo i- elitist .
(URobert Hughes, "Ukukhupha iFuse kwiCandelo." Ixesha , uAgasti 7, 1995)
"Kukho ... ukuxhomekeka kwenyaniso, njengokuthi 'ukulungiswa koqoqosho' kwintengo yemali. I-PC ikhuphelwa njengento 'yokuncitshiswa kwezoqoqosho' ukuba ihlwempu. "
(UPawulos Wasserman noDon Hausrath, iWeasel Words: I-Dictionary ye-American Doublespeak .
Funda iFrench Word Un Pote
I-Letter Letter Example
I-Biography kaFrank Lloyd Wright
Ukuzibophelela okuphantsi kokuxhatshazwa kwezeNdlu